I-Bunratty Castle View House
I-Bunratty Room, i-Private Twin bedroom ensuite ekhaya lomndeni. Ukubuka okuhle okubheke iBunratty Castle & Shannon Estuary, izingadi ezinhle, ukuhamba ngezinyawo imizuzu emi-5 ukuya ehlathini, eduze neLimerick City nokho enhliziyweni yasemaphandleni, imizuzu emi-5 ushayela uye ezindaweni zokudlela zasendaweni nasezinkantini eBunratty, imizuzu eyi-10 usuka eShannon Airport, imizuzu engama-45. ukuya eCliffs of Moher futhi ngaphansi kwehora ukusuka ezilwandle eClare naseGalway. Siphinde sibe nezindawo zokushicilela ezimbili zasendaweni, isitolo sezinhlanzi zendabuko kanye nesitolo se-chip & I-Pantry Deli
Ikhaya lomndeni elibanzi elamukelekayo elinezingadi ezinhle.
Sithanda ukubukwa okuhle okubheke eBunratty Castle & Shannon Estuary, okuhamba imizuzu emi-5 kuphela ukuya ehlathini, eduze nenkaba yedolobha nokho enhliziyweni yasemaphandleni, imizuzu emi-5 ushayela ezindaweni zethu zokudlela nezindawo zokucima ukoma.
Sixhumana nesivakashi sethu esinikeza iseluleko mayelana nokuvakasha kanye nezindawo eziheha izivakashi. Nathi sihlala endlini. Siyakuthanda ukuhlangana nokubingelela izivakashi zethu kuyilapho sihlonipha ubumfihlo bazo uma zifisa ukuba nesikhathi esithile njll.
Sixhumana nesivakashi sethu esinikeza iseluleko mayelana nokuvakasha kanye nezindawo eziheha izivakashi. Nathi sihlala endlini. Siyakuthanda ukuhlangana nokubingelela izivakashi ze…